Yaa biyyo Nanyaadhu – siifsiin
Yaa biyyo Nanyaadhu
Urgooftuun isheen ofitti biifte urgaansaa baayi’ee nama gammachiisa. Baayi’een gammade.Utuun morma ishee jala seenee caalaatti ishee suufee jedheen hawwe.Intalli kun umriin ishee waggaa 25 hin caalu.Bifti fuulaa,dhaabbatni qaamaa,uffannaafi ijoollummaan ishee urgooftuu dibattee wajjin walitti dabalamee qalbii dhiiraa salphaadhaan kan booji’udha. Miilla ishee walirra kaa’atte.Wandaboon ishee ol sassaabamee gudeeda ishee hanga oliitti saaxilee muldhise.Yaabiyyoo nanyaadhu ! Haalli ishee kun fedhii dhiirummaakoo kakkaasee tasgabbii nadhorkate.Yaa biyyoo nanyaadhu ! Kana maaltu natti ergee ? Jedhe. carraan intala kana itti arge dinqisiifadhe.Haala miira kana keessa daakaa sababiin jiruuf waa’ee dhufuufi hafuu hiriyaakoo yaaduu nan irraanfadhe. Utuun ishee bira taa’aa oolee bulee, ishee ilaalee kanan quufu natti hinfakkaatu.
Sa’atiin hiriyaakoo itti beellame darbuusaa utuman beekuu sa’atii harkakoo ammas ammas ilaalaa,achumaanis intalattii ija hatee ilaaluu ittin fufe.Isheenis akkuma koo sa’atii harka ishee al kudhan ilaalaa, Maakiyaattoo ishee unachaa, Mobaayilii ishee baastee bilbilte. O!O!O!Mobaayiliin ishee kan abbaa kuma kudhaniiti. Yaabiyyee nanyaadhu ! dhiiraa wajjin kan dubbattu ta’uu ishee haasaa isheerraan hubadhe. Dhiira beellamtee kan duraa hafe natti fakkaata.
Sa’atiin harka ishee,Warqeen qubaa,kan mormaafi Shawaaliyaan (Ambaarriin) harka ishee kan biraati. Uffannaan ishees Jaakeettaa, Wandaboofi kopheen boottii hanga jilba isheetti dheeratu gogaarra kan oomishaman si’a ta’an, gatii guddaadhaan kan bitaman natti fakkaata.Uffata gogaa (kal’oo,Leezerii)biyya faranjiitti hodhamee biyya keessa gale ta’uusaa hubadheera.Magaala iftu ilkaan ishee akka aannanii kan addaatan si’a ta’an, rifeensi mataa ishee gatiittii isheerra akka hiddaa gadi kan jige, intala baayi’ee bareedduu, dhiira gomjaasiftudha.Yaabiyyee nanyaadhu Qaama kana amma biyyoon ni nyaataa ? Jechaa utuun uumama ishee dinqisiifadhuu yaadi tokko sammuukootti dhufe.
“Dhiifama, obboleettii!Sa’atiinkee meeqa jettii? Kankoo kun sirrii natti fakkaachuu diddee”.Jedheen ishee gaafadhe.Ishee haasofsiisuuf barbaadeetani malee sa’atiin harkakoo sa’atii warqee kan qarshii kuma kudhaniin bitamedha.Ishee karaan itti haasofsiisu barbaacha soba dubbachuukoo sammuufi sa’atiinkoo kan nataajjabu natti fakkaate.Kanas haata’u sana isheen gaaffiikootiif deebii kennuuf “Okkee! sa’atii torba”jette. Sagaleen ishee akkam namatti tolaa?Yaabiyyoo nanyaadhu.
Intalli kana fakkaattu kun na haasofsiisuun ishee qofti garaa naqabbaneesse.Anis kana qofaan hin dhiisne.Itti fufeen utuun sodaadhuu “Dhiifama giiftii!ammas gaaffii tokkon qaba.”jedhe.Yaabiyyoo nanyaadhu!Isheen garuu “It’s all right go ahead”naan jette.Afaan Ingilizitiin. Yaabiyyoo nanyaadhu!.Intala barattedha.Sagalee koo ciccirachaa;nama beellamaa sa’atii tokko dabarsu siquunnamee beekaa?Utuu haalli akkasii siquunname maal jettaa? jedheen walitti aansee gaaffii dhiyeesseef.Isheenis “O ! my God !Ani obsa akkasii hin qabu.Inni nabeellame daqiiqaa shan dabarsinaan dhiiseen deema.Akka carraa anis akkuma kee namaa wajjin walbeellamee eegaan jira.Amma dhiisee deemuuf daqiiqaa muraasatu naahafe.”jette.
Egaa haala kanaan erga walitti madaqnee, mana ciisichaa hoteelichaa tokko seennee,akka xinnoo boqonnun ishee gaafadhe.Isheenis daftee deebii naaf hin kennine.Xinnoo erga yaadaa turte booda haala tasgabbaa’een:
“Ani jaalallee qaba. Isa malee dhiira gara biraa wajjin ba’ee hinbeeku. Siwaliin garuu haalli ittiin walbarreefi waliin amma teenyu nadinqa”.jettee kofalte.Anis ishee wajjin xiqqoo kolfeen mammaksa Oromoo isa,”Mana haadhakoon dhaqa jettee goraa bira hindarbin”jedhamu gara Afaan Amaaraatti hiikef.Ammas akka kolfuu taate;
Shankoriinaan battalaan utaaltee nabiraa kaatee mana dhiqannaa seente.Kan isheen dubbattu natti hin dhaga’amne malee bilbilaan haasa’uu ishee hubadheera. Haala ishee kanaafis waan gara biraatti ishee hin shakkine.Maal akka haasoftus hordofuu hinyaalle.Xiyyeeffannaankoo yoom dhuftee waliin ciisna kan jedhu ture.Xiqqoo turtee qullaa ishee dhuftee nafuldura dhaabbatte.Yaabiyyoo nanyaadhu!Kan qaama ishee irratti hafe butaantaafi qaboo harma ishee malee uffati gara biraan irra hin jiru. Kokkolfaa;
“Atis akkakoo baafadhuutii na eegi !”Jettee kutaa dhiqannaatti deebite. Anis Shugguxiikoo Boraatii jalatti ruuqeen uffatakoo hundumaa ofirraa baasee,duddaan ciiseen ammaa amma dhufti jedheen balbala kutaa dhiqannaa utuun ilaaluu, balballi mana ciisichaa baname. Kan ol natti seene garuu Shankoriinaa utuu hin ta’in dargaggoota lama kan hanga jirmaa gagga’anidha. Yaa biyyoo nanyaadhu! Dargaggeessi tokko Cuubee, inni tokko ammoo Shugguxii natti aggaame.Isheen ammoo uffata ishee uffattee kutaa dhiqannaa keessaa natti kokkolfaa gadi baatee;
“Kabbee ! Diraamaan keenya kun asirratti raawwata” Naan jette. Kursii irra deemtee miila ishee walirra naqattee teesse. Edaa isheen hoggantuu hattootaati. Ani kana hin hubanne.Horii hallayyaa marga duubaan jiru utuu hin argin marga dheedhuuf itti gamun ta’e.Hattuun shugguxii natti aggaamee;“Okke ! qajeelfama amma ani siif kennu raawwadhu.Harka kee lamaaniin mataa kee qabadhuutii siree ciisturraa gadi bu’ii jilbeenfadhu.”naan jedhe.Anis “Yaabiyyoo nanyaadhu!”jechaa akka mucaa wallaaltuu boo’aan akka isaan na ajajan jilbeenfadhee harka koo lamaaniin mataa koo qabadhe. Hattooti kunniin nanrukunne.Korojoo koo bananii keessa kan jiru Doolaarii U.S.Ameerikaa kuma 50fi qarshii Itoophiyaa kuma 100arganii burraaqan.Sa’atii warqee harka koo, kaateenaa warqee harka koo irraa,warqee qubaafi morma koo,uffata koo,kootiifi surree qarshii kuma kudhaniin biyya alaatii bitadhe,kophee qarshii kuma shanii,Moobaayilii koo kan qarshii kuma kudhanii walitti qabanii korojoo koo keessatti naqan.Battala kana akkuma mataa koo qabadheen;”Yaabiyyoo nanyaadhu!”jedheen akka tasaa dubbadhe.Yeroo kana sadan isaanii altokko natti kolfan. Akkas jechuun natti bare.Aadaa godhadheera.
”Yaabiyyoo nanyaadhu. Kan gaafa sanaa hin irraanfadhu!.”Jedhe Kabbadaan.
Asoosama kana hayyama barreessichaa malee kitaaba irratti, sabquunnamtii garaa garaa irrattis ta’e diraamaadhaan fayyadamuun seeraan gaafachiisa .
Isaayyaas Hordofaa Miijanaa
Previous Previous post: Sadan Sooddoo
Next Next post: Mararoo Gaa’eelaa ykn Warroommii